Izisebenzi zeZESA: Kakwenziwe Uphenyo Lwendlela Linkampani Esebenza Ngayo
Lezi zisebenzi zenkampani yamandla kagetsi zithi lokhu kakwenziwe ngoba kuyibo abaphazamisa ukusebenza kuhle kwalenkampani ngabomo besenzela ukunikeza eminye imisebenzi yamakhontilaka kumankampani abo.
Inhlanganiso yezisebenzi zeZESA
Lokhu kuvezwe ngabenhlanganiso emela izisebenzi zenkampani kagetsi le, eyeZESA eye Energy Sector Workers Union of Zimbabwe – ESWUZ, emhlanganweni lentathelizindaba wokulandula okuphume kuphephandba le Herald, okubaveza njengabantu abalobugovu ngoba befuna ukwengezelelwa iholo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye ESWUZ, umnumzana Gibson Mushunje uthi inkinga ngalenkampani mgabaqondisi bayo abehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela ukuze yanelize ukungenisa inzuzo eyiyo hatshi ingcosana abayitholayo.
UMushunje uthi iZESA ilakho ukuthola inzuzo enkulu, kulaleyo abayitholayo ngokuhlawulisa abamankampani amakhulu okubalisa abemigodi eyemba amatshe aligugu, ngoba kungekho encintisana layo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zezisebenzi elizweni eye Zimbabwe Congress of Trade Unions – ZCTU, umnumzana Japhet Moyo ukhuthaza uhulumende ukuba akangakuthathi lula osokuvezwe ngabe ESWUZ kundlela iziphathamandla ze ZESA eziqhuba ngayo umsebenzi.
Njenge ZCTU, u Moyo uthi kungumlandu wabo, ukudlulisela phambili okuvezwe ngabe ESWUZ, ukukusa kubaphathintambo nxa bengalithola ithuba lokwenze njalo.
Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi eye ZCTU
Ngempelaviki esanda kwedlula, iziphathamandla ze ZESA, zethule umbiko oveza izisebenzi zalenkampani njengabantu abangela zwelo, befuna ukungezelelwa iholo ngesilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini – 75%. Kodwa abe ESWUZ bayakulandula lokho bethu leso silinganiso bekungesabekwayo ukusungula lapho bezoqalisela inkulumo zokwengezelelwa iholo kungayisikho ukuthi yiso silinganiso abasifunayo.
Balandule njalo ukuba behola imali enengi, ohola enlutshwana yankona isukela kumakhulu ayisitshiyagalolunye amadollar ngenyanga-%900. Kodwa ubufakazi obutshengiswe lumsakazo buveza ukuba ohola eliphansi ngothola amadola edlula kancane amakhulu amabili kuphela-$242.
Bathi kunengi umphathintambo wezamandla kagetsi akufihlelwayo yilezi ziphathamandla okubalisa indlela imisebenzi yamatender enikezwa ngayo, kungela kuthembeka lenkohlakalo ekuqhubeni umsebenzi okwenza inkampani yehluleke ukuthola inzuzo eyiyo okumele iyithole.benika isibonelo sikasomabhizimusi uWicknell Chivhayo ocatshangelwa ukuba wayesebenzisana lamalunga ecele le G40, kuhulumende kowayengumongameli Robert Mugabe, wanikezwa itender ebiza amadola edlula kancane ingxenye ye billion -$684 million, awatholiswa ngendlela zenkohlakalo.
Bathi kulemisebenzi yenkohlakalo eminengi kundlela amankampani amakhulu ahlawulela ngayo amandla kagetsi, phansi kohlelo lwe Maximumam Demand Meter.